Wararka Maanta: Talaado, July 31, 2012-Xoghayaha Arrimaha Dibadda ee Mareykanka oo lagu wado inay Madaxda Soomaalida kula kulanto Magaalada Nairobi ee dalka Kenya
Kulanka Clinton iyo saxiixayaasha Roadmap-ka ayaa la sheegay in diiradda lagu saari doono sidii xilliga KMG-nimada Soomaaliya loogu soo af-meeri xilligii horay loogu qabtay oo ah 20-ka bisha Ogoosto ee sannadkan.
Hillary Clinton ayaa lagu wadaa inay booqato lix waddan oo ku yaalla Qaaradda Afrika kuwaasoo kala ah: Kenya, Uganda, Koonfurta Suudaan, Sinigaal, Koonfur Afrika iyo Malawi, iyadoo war kasoo baxay xafiiska xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka lagu sheegay in maanta ay billaabanayaan booqashooyinkeeda.
Madaxda Soomaalida ayaa waxay hadda ku mashquulsan yihiin doorashooyinka ka dhacaya dalka bisha Ogoosto, taasoo ay u taagan yihiin murashaxiin fara badan oo uu ku jiro madaxweynaha Soomaaliya.
Inkastoo uusan jirin hadal kasoo baxay dhinaca dowladda KMG ah iyo maamullada dalka ka jira ee saxiixay heshiiskii Roadmap-ka ayaa haddana wuxuu kulankan u noqonayaa madaxweyne Shariif Sheekh markii labaad oo uu Clinton la kulamo tan iyo markii loo doortay madaxweynaha Soomaaliya.
Wararka ayaa waxay sheegayaan in madaxweynaha Uganda ay kala hadli doonto sidii uu u xoojin lahaa gacanta uu ka geysanayo sidii lagu adkeyn lahaa ammaanka guud ee Soomaaliya oo ay ciidammo ka joogaan dalkiisa.